Azerbaijan: Tanora Mafàna Fo Voaheloka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Mey 2011 7:38 GMT
Jabbar Savalan, tanora 20 taona, mafana fo amin'ny fanoherana, voasambotra tao Azerbaijan tamin'ny 5 Febroary, dia voampanga hifonja roa taona sy tapany noho ny fihazonana zava-mahadomelina. Na izany aza, ireo nàmany sy mpanohana azy ary ireo mpampahalala vaovao maro mpanara-maso ny resaka fahalalahana sy zon'olombelona ihany koa, dia manohana ny hoe notazonina i Javalan noho ireo antso nataony tao amin'ny Facebook ho fikarakarana hetsi-panoherana ao Azerbaijan taorian'ireo hetsi-bahoaka tany Tonizia sy Ejipta.
Tanatinà filazana an-gazety iray taorian'ny didy navoaka tamin'ny Alarobia, Amnesty International nilaza fa raisiny ho nofonjaina noho ny fahatsiarovan-tenany ilay tanora mafana fo.
“Ny porofo rehetra dia toa misarika hihevitra fa raha ny marina dia voaheloka noho ny fiampangana diso i Jabbar Savalan,” hoy i John Dalhuisen, Tale Lefitra misahana an'i Eraopa sy Azia Afovoany ao amin'ny Amnesty International.
“Mazava be izao fa ny tena anton'ny nitsarana azy sy ny fanamelohana azy dia ny hanafaizana azy ho – sady handemena ny hafa tsy hanao toy izany – niantso hetsi-panoherana manohitra ny governemanta miainga avy amin'ireo zava-nitranga tany amin'ny faritra Afovoany Atsinanana. Voaheloka noho ny fanehoany am-pilaminana ny zony hahazo miteny malalaka i Jabbar Savalan.”
Nohelohina ihany i Jabbar Savalan na teo aza ny valin'ny fitiliana rà natao taminy izay nilaza ny tsy fandraisany zava-mahadomelina. Ny fototra ijoroan'ilay fanamelohana dia ny fiaikena noterena hataony sonia ary nolaviny avy eo. Tsy nomena fahafahana hanana mpisolovava izy nandritra ny fakàna am-bavany azy.
vohikala fanohanana an'i Jabbar Savalan
Na dia efa olana nandritra ny fotoana maharitra aza ny fahalalahan'ny gazety ao Azerbaijan, ireo zava-misy vao haingana dia manasongadina ny fiakaran'ny isan'ireo tranga momba ny fahalalahana miteny eo anivon'ny aterineto. Tamin'ny Martsa, Bakhtiyar Hajiyev, nahazo diplaona tany Harvard ary mpanao politika mafana fo dia notanana ihany koa, nabaribary fa hoe nandositra raharaha miaramila izy, fanampin'ny fikarakarany ny hetsi-panoheran'ireo mpomba ny demaokrasia teo amin'ny firenena tamin'ny alalan'ny Facebook. Misy fiampangana amin'ny ady heloka ihany koa izao nalefa ho an'ny iray amin'ireo hafa mpikarakara, i Elnur Majidli monina any Strasbourg.
Ireo fanakianana miantefa amin'ireo manampahefana ao amin'ity firenena manan-karena solika tao amin'ny respoblika sovietika fahiny ity dia manamafy fa manjary miha-sarotra ny toe-javatra ankehitriny raha ampitahaina amin'ireo tatitra teo aloha mikasika ny firenena momba ny fanakombonam-bava ireo izay tsy faly. Voafonja iray hafa noho ny fahatsiarovantena ho an'ny Amnesty International, ilay mpanao gazety Eynulla Fatullayev, izay efa tany am-ponja sahady na dia niteny nanome rariny azy aza ny Fitsarana Eraopeana Misahana ny Zon'Olombelona ary nangataka ny hanmotsorana azy avy hatrany. Toa an'i Savalan, i Fatullayev izao dia voafonja noho ny fiampangana ho nitazona zava-mahadomelina .
Niteny nandritra ny hetsika tamin'ity herinandro ity Andro Erantany Ho An'ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovana Gazety tao amin'ny UNESCO, Adnan Hajizade sy Emin Milli dia nanamarika ny mbola fampiasana ny fiampangana toy izany ho fanampenam-bava ny feon'ireo manakiana. Ireo tanora roa mafana fo, mpitoraka lahatsary am-bilaogy, nofonjaina tamin'ny 2009 ary navotsotra narahana fepetra tamin'ny Novambra tamin'ny taon-dasa dia nanatevin-daharana ny fiaraha-midinika tao amin'ny Skype nataon'ireo mpitarika tanora. Feno hadrohadro, na izany aza, ny andro nanaraka an'io ny Minisitry ny Fifandraisan-davitra Azerbaijani , Ali Abbasov, dia niloa-bava fa manohintohina ny fiandrianam-pirenena ny Skype [angl].
Ny fifanandrifian'ny teny fanamarihana dia mety ho kisendrasendra fotsiny ihany, saingy raha zohiana ny zotra arahan'ny governemanta hatramin'ny androany, ampoizo fa ho maro no mbola ho avy ary angamba hiaraka aminà antony milay be. Tamin'ny fanamarihana ny Andro Erantany Ho An'ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovana Gazety, ny Reporters Sans Frontières dia nametraka ny Filoha Azerbaijani , Ilham Aliyev ho 1 amin'ireo 38 ” Mpanimbazimba ny Fahalalahan'ny Gazety.”
Fahalalahàna miteny 4 andro izay